Ngirozi Dzinogona Kukubatsira Sei?
NYAYA IRI PAKAVHA | NGIROZI​—DZIRIKO HERE? KUZVIZIVA KUNOBATSIREI?
Ngirozi dzakavimbika dzinoda chaizvo kubatsira vanhu uye dzinoshanda nesimba pakuita zvinodiwa naJehovha. Mwari paakasika nyika, ngirozi ‘dzakashevedzera nomufaro pamwe chete, uye vanakomana vose vaMwari vakatanga kushevedzera vachirumbidza.’ (Jobho 38:4, 7) Kubvira kare, ngirozi dzagara dzichida “kunyatsotarira” kuti zvinhu zvichazadzika sei maererano nezvakataurwa neuprofita.​—1 Petro 1:11, 12.
Bhaibheri rinoratidza kuti dzimwe nguva ngirozi dzaiponesa vashumiri vaMwari kuitira kuti chinangwa chaMwari chizadzike. (Pisarema 34:7) Semuenzaniso:
Jehovha paakaparadza maguta akanga akaipa eSodhoma neGomora, ngirozi dzakabatsira Roti nemhuri yake kuti vabude kuti vasaparadzwa.​—Genesisi 19:1, 15-26.
VaHebheru vatatu vaiva muBhabhironi pavakakandwa mugomba remoto, Mwari ‘akatuma ngirozi yake ikanunura vashumiri vake.’​—Dhanieri 3:19-28.
Mumwe mushumiri waMwari ainzi Dhanieri paakaita usiku hwese ari mugomba reshumba, akati akaponeswa naMwari ‘paakatuma ngirozi yake, ikavhara miromo yeshumba.’​—Dhanieri 6:16, 22.
Ngirozi dzakabvira kare dzichibatsira vanhu vakatendeka
NGIROZI DZAKABATSIRA VAKRISTU VEPAKUTANGA
Dzimwe nguva, ngirozi dzaMwari dzaibatsira vaKristu vepakutanga kuitira kuti chinangwa chaJehovha chizadzike. Semuenzaniso:
Ngirozi yakavhura madhoo ejeri ikaudza vaapostora vakanga vakasungwa kuti vaenderere mberi nekuparidza mutemberi.​—Mabasa 5:17-21.
Ngirozi yakaudza muevhangeri Firipi kuti aende kumugwagwa waibva kuJerusarema uchienda kuGaza kuti anoparidzira murume wekuItiopiya akanga achibva kuJerusarema kunonamata.​—Mabasa 8:26-33.
Nguva yaMwari yekuti vanhu vasiri vaJudha vave vaKristu payakakwana, ngirozi yakaenda kumukuru mukuru wemauto eRoma ainzi Koneriyasi ichibva yamuudza kuti anoshevedza muapostora Petro.​—Mabasa 10:3-5.
Muapostora Petro paakanga akasungwa, ngirozi yakauya kwaari ikamubudisa mujeri.​—Mabasa 12:1-11.
Hapana chinoratidza kuti mazuva ano Mwari achiri kushandisa ngirozi kuti dzibatsire vanhu sezvadzaiita kare. Asi Jesu paaitaura nezvenguva yatiri kurarama, akati: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika.” (Mateu 24:14) Unozviziva here kuti vadzidzi vaJesu vari kuita basa iri vachitungamirirwa nengirozi?
Ngirozi dziri kubatsira kuparidza mashoko akanaka pasi rese
Bhuku raZvakazarurwa rinoratidza kuti ngirozi dzaizoshanda nesimba kubatsira vanhu kuti vaziveJehovha Mwari uye zvinangwa zvake. Muapostora Johani akanyora kuti: “Ndakaona imwe ngirozi ichibhururuka nepakati pedenga, uye yakanga iine mashoko akanaka asingaperi okuti izivise semashoko anofadza kune vaya vanogara panyika, nokumarudzi ose nemadzinza nendimi nevanhu, ichiti nenzwi guru: ‘Ityai Mwari mumukudze, nokuti awa yokutonga kwake yasvika, naizvozvo namatai Iye akasika denga nenyika negungwa nezvitubu zvemvura.’” (Zvakazarurwa 14:6, 7) Nyaya dziri kuitika mazuva ano dzinoratidza kuti ngirozi dziri kutsigira basa iri rekuparidza Umambo riri kuitwa pasi rese. Kunyange kana mutadzi mumwe chete akapfidza odzoka kuna Jehovha, “mufaro unovapo pakati pengirozi dzaMwari.”​—Ruka 15:10.
Chii chichaitika kana basa rekuparidza rapera? ‘Mauto ekudenga’ engirozi achabatana naJesu Kristu, Mambo wemadzimambo ‘pahondo yezuva guru raMwari Wemasimbaose’ inonzi Amagedhoni. (Zvakazarurwa 16:14-16; 19:14-16) Ngirozi idzi dzine simba dzichatsigirana naIshe Jesu ‘paachatsiva vaya vasingateereri mashoko akanaka pamusoro paShe wedu Jesu.’​—2 VaTesaronika 1:7, 8.
Saka ziva kuti ngirozi dzinoda kukubatsira. Dzinoda chaizvo vanhu vane chido chekunamata Mwari, uye Jehovha anogara achidzishandisa kuti dzisimbise uye dzidzivirire vashumiri vake vakavimbika vari panyika.​—VaHebheru 1:14.
Mumwe nemumwe wedu anofanira kuita chisarudzo chinokosha. Tichateerera here mashoko akanaka ari kuparidzwa pasi rese? Zvapupu zvaJehovha zvekwaunogara zvinoda chaizvo kukuratidza zvaungaitawo kuti ubatsirwe nengirozi dzaMwari.
Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?
Ona kana Mwari achiteerera minyengetero yose, manyengeterero atinofanira kuita, uye kuti chiizve chatingaita kuti tiswedere pedyo naMwari.
Ndivanaani Vanogara Kudenga?
Magwaro anotiudzei nezvaJehovha, Jesu Kristu, uye ngirozi dzakatendeka?
Mwari Anondinzwa Here Kana Ndikanyengetera?